बिहिबार ३ भदौ, २०७८
सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)का लागि आवेदन दिएकाहरू यतिबेला परीक्षाको पर्खाइमा छन् । कोरोना महामारीका कारण गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएसँगै लाइसेन्सको ट्रायलको प्रक्रिया रोकिएको थियो । अब कहिलेदेखि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । जसका कारण अनलाइन आवेदन दिएका, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति पाइसकेका गरेर सात लाखभन्दा बढी मानिस पर्खाइमा छन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग कहिलेदेखि ट्रायल प्रक्रिया खोल्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । निषेधाज्ञाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको प्रक्रिया निषेधाज्ञा सहज भएको लामो समय भइसक्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन । विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालले कहिलेदेखि खुला गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । कोरोना सहज हुँदै गएको भए केही दिनभित्रैबाट लाइसेन्स परीक्षा खुलाउने तयारी विभागको थियो । तर, दिन–प्रतिदिन फेरि बढ्न थालेको कोरोना संक्रमणका कारण निर्णय गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए ।
कोरोना संक्रमणदर घट्दै गयो भने केही दिनभित्रमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । संक्रमणदर बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा निश्चित भइसकेको छैन । समय अझै लम्बिन सक्छ,’ भुसालले भने । लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन भरेकाहरूको मिति रिसेड्युल हुने विभागले जनाएको छ । उक्त जानकारी अनलाइन आवेदन भर्दा राखिएको फोन नम्बरमा म्यासेज आउने उनको भनाइ छ । अहिले नै यो प्रक्रिया कहिलेबाट सुचारु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएपछि म्यासेजमार्फत जानकारी गराउँछौँ ।’
परीक्षा प्रणाली थप खुकुलो
विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणाली थप खुकुलो बनाएको छ । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका–२०७७’ मार्फत परीक्षा प्रणाली थप खुकुलो बनाइएको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा सहभागीमध्ये एक तिहाइभन्दा कम मात्रै पास हुने गरेको भन्दै विभागले कार्यविधि निर्देशिकामार्फत परीक्षा खुकुलो बनाइएको सूचना अधिकारी डा. भुसालले बताए । परीक्षा प्रणाली कडा हुँदा धेरै सहभागी अनुत्तीर्ण भएपछि यसलाई खुकुलो बनाइएको हो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षाको लिखित र प्रयोगात्मक दुवै प्रणली परिवर्तन गरिएको भुसालले बताए । लिखित परीक्षाका लागि विभागले वेबसाइटमा पाँच सय प्रश्न राखेको छ । परीक्षामा त्यहीबाट २५ प्रश्न सोधिनेछन् । कुन खण्डमा कति प्रश्न सोधिनेछन् भन्ने मापदण्डअनुसार हुनेछ । पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागीले शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेमा अहिले ७० प्रतिशत ल्याए पुग्छ भने लिखित परीक्षामा पहिले ५० प्रतिशत उत्तीर्णांक थियो । अब त्यसलाई बढाएर ६० बनाइएको छ ।
परीक्षार्थीलाई सजिलो बनाउनका लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा पास गर्न चाहिने नम्बर कम गरिएको हो । प्रयोगात्मक परीक्षामा आठवटा आधार रहेकामा कुनैमा गल्ती गर्नै नहुने र कुनै–कुनैमा सानो गल्ती भइहालेमा पनि पास नै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । पहेँलो धर्कामा छुँदा, एकपटक केही गरी गाडी बन्द भएमा वा मोडमा बत्ती नबाल्दा छुट दिइनेछ । उकालोमा रोकेर अड्याउनुपर्नेमा नअड्याएमा भने फेल हुनेछ । नेपालमा २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सहभागी मात्रै पास हुने गरेका छन् ।
जबकि अन्य देशमा ६० देखि ७० प्रतिशत सहभागी पास हुने गरेको देखिएको छ । दुर्घटनाको कारण परीक्षामा कडा पारेर समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘चालकको व्यवहारको कारण दुर्घटना हुने हो । परीक्षामा कडा गरेर दुर्घटना रोक्न सकिँदैन,’ उनले भने । दुर्घटना चालकले नजानेर वा हेलचेक्र्याइँ गरेर हुने गरेको छ । ‘मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा, ध्यान अन्यत्र केन्द्रित हुँदा दुर्घटना हुने हो । परीक्षामा धेरै नम्बर ल्याएर पास भएमा दुर्घटना नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । पास हुने दर कम हुँदा गैरकानुनी बाटोबाट अनुमतिपत्र लिन खोज्ने प्रवृत्ति रहेकामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।